कोभिड–१९ बाट आध्यात्मिक पाठ « रिपोर्टर्स नेपाल
कोभिड–१९ बाट आध्यात्मिक पाठ
‘म ठूलो छु, भद्दा छु’ –वाल्ट व्हाइटम्यान
अभिजित पाठकः यस्तो देखिन्छ कि हामी सबै टुटेका छौं र घाइते छौ । जब, हामी मानसिक त्रास, अस्थिर अनिश्चितता र मृत्युको डरबाट पार हुन्छौं । एक प्रश्नले हामीलाई सामना गर्दछः हामी कसरी बाँचिरहेका छौं? के कोभिड–१९ को उपयुक्त दिशानिर्देशहरू मास्क लगाउने, स्यानीटाइजरको प्रयोग गर्ने, ठूला जमघटहरूलाई बेवास्ता गर्ने र आफूलाई सकेसम्म छिटो खोप लगाउने मात्र हो ? के अरू केही छैन र? यसबाहेक, हाम्रो आधारभूत अस्तित्वका मुद्दाहरूको साथसाथै अथाह आर्थिक र आर्थिक चिन्ताले हामीलाई पिरोलिरहेको छ ।
यद्यपी, यी व्यावहारिक अवरोधहरूको साटो, यस्ता क्षणहरू हुन्छन् जब हामीले जीवनको उद्देश्यको बारेमा सोच्न थाल्छौं किनभने हामी प्रत्येकले हाम्रा प्रियजनहरू मरेका देख्यौं, हाम्रोले स्वतः “ग्रहण गेरको’’ संसार भताभूग भयो । हाम्रो सुविधाहरू जस्तै चिकित्सा बीमा र सामाजिक पूँजी अराजक अस्पतालहरू र अप्रबन्धित श्मशानघाटको बीचमा भ्रमको रूपमा प्रमाणित हुन्छ । हो, हामी खोपहरू लिनेछौं ।
सम्भवतः, अर्थशास्त्री र नीति निर्माताहरूले हामीलाई आश्वासन दिन्छन् र उनीहरुले बृद्धि भएको विकास दर र जीडीपीको साथ “राम्रो“ भविष्यको प्रतिज्ञा गर्छन् । तर, महामारीले खडा गरेका मानसिक/अस्तित्वगत/आध्यात्मिक प्रश्नहरूले हामीलाई सताउन सक्षम छन् । डाक्टरहरू, औषधि कम्पनीहरू, वा मनोचिकित्सक औषधिहरूले पनि यी प्रश्नहरूको अर्थपूर्ण जवाफ दिन सक्दैन; न त सेलिब्रेटी बाबाहरूले क्याप्सूल दिन सक्छन् । सम्भवतः हामीले आफूलाई अन्वेषक र भौतारिनेको रूपमा परिभाषित गर्न महामारीले सन्देश पठाइरहेको जस्तो छ ।
आधुनिकताले उत्पन्न गर्ने विशाल महत्त्वपूर्ण उर्जाले हामीलाई सोच्छ कि हामी संसारको मालिक हौं। विज्ञानको साथ, हामी जान्न सक्छौं, भविष्यवाणी गर्न सक्छौं र नियन्त्रण गर्न सक्छौं। प्रविधिको साथ हामी विश्वलाई आफ्नो इच्छा अनुसार आकार दिन सक्छौं । चिकित्सा विज्ञान र डायग्नोस्टिक टेक्नोलोजीमा उल्लेखनीय वृद्धिको साथ, हामी मृत्युलाई स्थगित गर्न सक्छौं । ठिक छ, कसले आधुनिकताको सफलताका कथाहरू लाई नकार्न सक्छ ? यद्यपि, आधुनिकताको यस चित्ताका बीचमा, हामी अस्थायीताको वास्तविकता, वा अस्तित्वको स्वाभाविक अनिश्चितता बिर्सन्छौं ।
प्लास्टिक सर्जरी र एन्टी–एजिंग यन्त्रहरूको चमत्कारको बाबजुद एउटा सुन्दर रानी कंकाल बन्नेछ; सबै कुराको पूर्वानुमान गर्न सकिदैन, मौसम विभागले आज दिउँसो दक्षिणी दिल्लीमा वर्षा हुन्छ कि हुँदैन भनेर भविष्यवाणी गरेको हुन्छ । यद्यपि प्रायः जसो हाम्रो आधुनिकतावादी “निश्चितता“, “उत्पादकता“, निरन्तर “वृद्धि“ र असीमित खपतका कारण हामी बिर्सन्छौं कि केही पनि स्थायी छैन र अर्को क्षणको पूर्वानुमान गर्न सकिदैन । यो दुखद छ कि हामीलाई अस्थिरता र अनिश्चितताको यथार्थता स्पष्ट रूपमा हेर्नको लागि हामीलाई यस किसिमको महामारीको आवश्यक छ ।
सम्भवतः हामी अस्थायी र अनिश्चितताको यथार्थतालाई बुझ्ने क्रममा, हामी मानसिकताको मूल्यलाई महत्व दिन थाल्छौं । हो, हाम्रो “भोली“ पूर्वानुमान बाहिर छ; न त कुनै डाक्टर वा ज्योतिषीले भविष्यवाणी गर्न सक्दछन् कि भोलि अर्को सूर्योदय हेर्न हामी भाग्यमानी हुनेछौ कि छैनौँ । यद्यपि हामी बाँच्न सक्दछौं – र गहिरो, तीव्रता र दिमागपूर्वक – यसै क्षणमा हामी बाँच्न सक्छौ । “भविष्य’’ लाई नियन्त्रण वा डरको नाममा हामी किन यो क्षणको जीवितताको उपेक्षा गर्छौ ? जब हामी वास्तवमै जीवित हुन्छौं र यो क्षणको अनुभव गर्दछौं, कृतज्ञताको भावनाले हामीलाई समाहित गर्छ र जीवनको अर्थ प्राप्त हुन्छ ।
शहरी केन्द्रहरूले गुमनामीलाई सामान्य बनाउँदै जान्छ र कार्यस्थलहरूले हामीलाई प्रतिस्पर्धीहरूमा परिवर्तन गर्नेछ । हामी सोच्छौं कि पैसाले सबै कुरा किन्न सक्दछौँ, वा हामी आफूलाई फेसबुक/इन्स्टाग्राम/ट्विटर अनुयायीहरू र ग्राहकहरूको तथ्यांकमा हेर्न थाल्छौं वा यस कुराको लागि, जब निगरानीको टेक्नोलोजीले हामीलाई सबैलाई शंका गर्न सिकाउँछ । जहाँ जीवनदायी मानव सम्बन्धको सम्भावना छ, वा प्राणको साथ एक जीवित समुदाय छ ? यो हाम्रो समयको विडम्बना हो कि यो महामारीवादी घमण्डको घोरपन देख्नका लागि हामीलाई महामारीको आवश्यकता पर्यो । के कोही त्यस्तो व्यक्ति छ जसले एक्लोपनको तीव्र पीडा महसुस गरेन् – कलंकित हुने र इन्सुलेटेड हुने डर भाइरस अप्रत्याशित हुन्छ, अस्पतालको आईसीयूमा एक्लो मृत्युको डर, वा कसैको मृत शरीर फ्याँक्ने डर । “पवित्र“ नदी ? हामी प्रत्येकले माया गर्नुपर्ने, छुनु र सुन्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं; हामी सबैले महसुस गरेका छौं कि पैसाले सबै कुरा किन्न सक्दैन; र हामी सबैले महसुस गरेका छौं कि जीवनमा प्रेमको परमानन्दभन्दा बढी केही महत्वपूर्ण छैन । प्रेमले मृत्युलाई अर्थपूर्ण बनाउँदछ; प्रेम खोप भन्दा धेरै शक्तिशाली छ । सम्भवतः महामारीले हामीलाई यो उचित प्रश्न गर्न बाध्य पार्छः के हामी पैसाको शक्तिमा प्रेमलाई प्राथमिकता दिन सक्छौं ? के हामी मिडियाको मिथ्या र अति वास्तविकताभन्दा मानवीय सम्बन्धहरूको सहजतालाई बढी महत्व दिन सक्छौं ?
महामारी विनाशकारी छ । बच्नका लागि, संसार अब उस्तै हुनेछैन । यद्यपि, सबै प्रयासहरू – विशेष गरी टेक्नो पूँजीवादी र मादक राजनीतिक मालिकहरूको ब्रिगेडद्वारा–नयाँ पीढीलाई विश्वस्त गराउन कि जीवन एक समान लोभ, हिंसा र एकाकीपनको साथ अघि बढ्नुपर्छ । जहाँसम्म, यदि तपाईं र म आत्मनिर्णयशील, चिन्तनशील र चिन्तनशील हुन इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामी यो महसुस गर्न बाध्य छौं कि हामीले जीवनको लय बदल्नु पर्छ र नम्रता, कृतज्ञता र प्रेमका साथ बाँच्न सिक्नु पर्छ । त्यसोभए मात्र थिच नट हानको भविष्यसूचक दर्शनको गहिराइलाई महसुस गर्न सकिन्छः “जब हामी अस्तित्वमा रहेका सबैको जीवनको साथ पहिचान गर्छौं, तब हामी महसुस गर्छाैं कि जन्म र मृत्यु भनेको एउटा परिवर्तनशील ब्रह्माण्डमा सानो उतार चढाव हो ।’’ (अभिजित पाठक जेएनयूमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। यो आलेख इन्डियन एक्सप्रेसबाट भावानुवाद गरिएको हो)
चीनको छिमेकी देशहरुसँग बढ्दो सीमा विवाद
प्रभात सिंहः चीनको १४ देशसँग जमिन जोडिएको छ । उसको समुन्द्र मार्गबाट नजिक रहेका छिमेकीहरु